I-Aluminium Diamond Isikebhe Sokunyathela Ishidi - Abakhiqizi baseChina beAluminium Diamond, Abahlinzeki
Uhlobo lwamapaneli odonga lwe-aluminium luhlukahlukene futhi lungahlukaniswa ikakhulu ngamapaneli wangaphakathi e-aluminium odongeni namaphaneli wangaphandle e-aluminium. Amapaneli wensimbi yensimbi ye-aluminium anokubukeka okuhle, futhi angaba nemisebenzi yokuvikela umlilo, ukuvikela umbani, ukulondolozwa kokushisa, ukuvimba umsindo, ukungena komoya, ukufiphaza nokunye.
I-8000 series aluminium alloy ephathelene nolunye uchungechunge futhi ibanga le-aluminium elijwayeleke kakhulu yi-8011 aluminium alloy. Isicelo esikhulu kunazo zonke se-8011 aluminium alloy yizinhlobo ze-aluminium foil, kepha ayisetshenziswa kakhulu kupuleti.
Iphethini lamapuleti edayimane le-Aluminium lisiza ekunciphiseni ubungozi bokuxegiselwa okwenza kube ukusetshenziswa okuhle kakhulu kuzilungiselelo zezimboni njengezitebhisi, iziphambeko nezindawo zokuhamba.
Ikhoyili ye-Aluminium ngumkhiqizo wensimbi obhekene neshear endizayo ngemuva kokugoqa nokugoba ukucutshungulwa kwekhoneni ngomshini wokugaya nokugingqa.
Amakhoyili we-Aluminium asetshenziswa kakhulu ku-elekthronikhi, ukupakisha, ukwakhiwa, imishini, njll. Kunabakhiqizi abaningi bekhoyili ye-aluminium ezweni lami, futhi inqubo yokukhiqiza ibambe amazwe athuthukile. Amakhoyili we-Aluminium aqukethe izinto ezihlukile zensimbi.
Ngokomgomo ohlukile wokuhlukaniswa, kunezinhlobo eziningi zezinsimbi ezijwayelekile ze-aluminium.
Okokuqala, ama-alloys avamile e-aluminium ahlukaniswe ama-8 aluminium alloy chungechunge ngokuya ngamakhemikhali ahlukile;
Ukumbozwa kodonga lwangaphandle lwe-aluminium luhlobo olubalulekile lwamashidi e-aluminium ezindongeni. Emphakathini wanamuhla, ubuchwepheshe bokukhiqiza nokucubungula kwe-aluminium sheet cladding sekuthuthukile impela. Imiklamo yangaphandle ye-aluminium eyinhlanganisela nayo ihlanganisa izinkambu ezahlukahlukene futhi okugqokwe nge-aluminium kuyingxenye ebalulekile ekukhiqizeni amaphaneli e-aluminium odonga.
I-6061-T6 ingelinye lama-alloys ochungechunge lwe-aluminium asetshenziswa kakhulu angama-6000. Ama-aluminium amashidi angama-6000 anikeziwe afaka phakathi i-6061 ne-6082 chungechunge. Ngokuqondile, ishidi le-aluminium le-6061 lungumkhiqizo omele phakathi kwalolu chungechunge.